Date: April 19, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 19 Ebla 2015) Guyyaa Gootota Oromoo fi mirga namoomaa biyya Nezerlaandi, magaalaa Amersfoortitti kabajame.
Ayyaana kana irratti dhaabbatni UNPO jedhamu miidhaan ummata Oromoorra gayaa jiru akkataa Chaartera Dhaabbata Mootummoota Addunyaa (UN Charter) fi waliigalteewwan addunyaa biyyootni addunyaa mallatteessaniin (kan Itoophiyaanis mallatteessiteen) yoo ilaallamu yaaddessaafi gaddisiisaa taúun ibse.
Jaarmichi akka dubbatetti, Ummatni Oromoo waliigalteewwan Mirgoota Namoomaa, Diinagdeefi Hawaasummaa Itoophiyaan mallatteessite bu’uura godhachuudhaan falmiifi dhiibbaa taasisuu akka danda’amu eeraniiru.
Ebli 15 Seenaa qabsoo ummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Guyyaa hooggansi ol’aanaan abbaa biyyummaafi mirga namummaa Oromoo kabajsiisuuf ka’e itti wereegame, guyyaa kaayyoo Oromummaa malee amantiin gargar hin baanu jechuun goototni Oromoo itti wereegamani dha.
Guyyaan kun bara baraan qophii addaddaatiin kabajamaa/yaadatamaa oola. Mirga abbaa biyyummaa sarbauu keennaan guyyaa akkanaa kanas ummata keenna keessatti kaayyoo isaan wereegamaniif ibsuun kabajuun hin danda’amne. Har’a qaanqeen Kaayyoon Jaallewwan qaqqaaliin itti wereegamaniifi har’allee itti wereegamaa jiran ummata Oromoo bira dabree addunyaafillee dhageettii guddaa ta’eera.
Namooti sirna kana irratti argaman akka ibsanittis, ”dubbiifi mataa abbatu sochoofata” akkuma jedhamu, abbaa biyyumaa Oromoo mirkaneeffachuuf sochiin, kutannoofi ga’een tokkoo tokkoo ilmaan Oromoo murteessaa dha,
Kana waan ta’eef, Oromoon bakka jirutti, dhaamsa jaalleewwan wereegamnii qabatee galma gayiinsa isaatiif cichoominaan hojjachuu qaba.
Previous Previous post: Seenaa Ad Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)
Next Next post: Tarkaanfii Sukanneessaa Libiyaa Keessatti Fudhatame Irratti Ibsa ABO